स्मार्ट फोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरुमा ध्यान दिनुस् ! | नेपालन्युज
स्मार्ट फोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरुमा ध्यान दिनुस् !
आधुनिक प्रविधिसँगै पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रविधिको विकास भइरहेको छ । जसमध्ये मोबाइल पनि एक हाे । माेबाइल मानिसको सबै भन्दा प्रिय साथी बनिसकेको छ । अहिलेको समयमा मोबाइल प्रयोग नगर्ने मानिस सायद कमै मात्रामा होलान् । मोबाइल त प्रयोग गर्दछौं त , कस्तो मोबाइल लिने भन्ने बारेमा सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तसर्थ मोबाइल खरिद गर्ने समयमा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस् ।
उपयुक्त डिजाइन रोज्ने- बाजारमा थरि–थरिका डिजाइनमा फोनहरु आएका छन् । फोनमात्र त्यस्तो साधन हो जुन हामीले जहाँ-जाँदा पनि आफूसँगै बोकेर लाने गर्दछौँ । योसँगै तपाईँले आफ्ना महत्वपूर्ण क्षणहरु बिताउँनु हुने भएकाले डिजाइनमा पनि विशेष ध्यान दिनुस् ।
खरिद गर्न चाहेको फोनका विशेषताहरु थाहा पाउने- तपाईँले चाहेको फोनका विशेषता र क्षमताका बारेमा जानकार हुँनुहुन्छ भने नचाहेका वा आवश्यक नपरेका विशेषताका लागि ठूलो रकम खरिद गरिरहनु पर्दैन । जस्तो सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एजमा सबै कुरा छन्– घुमाउरो स्क्रिनका साथै यसको आफ्नै इन्टरफेस र न्याभिगेसन कन्ट्रोल रहेको छ । तर तपाईँ यसमा रहेको पेन वा नयाँ युआइ प्रयोग गर्नुहुन्न भने यो मंहगो फोनमा धेरै खर्च गनुहँदैछ ।
धेरै सस्तोको पछि नलाग्ने- धरै सस्तो फोनको पछि नलाग्ने । आफूले किन्न सक्ने फोन लिएको राम्रो । किनीसकेपछि केही लामो समयसम्म टिक्ने फोन किन्दा नै बेस हुन्छ । संभव भएसम्म फोनको अर्को अपग्रेड नआउन्जेल काम गर्ने गुणस्तरिय क्यामेरा र प्रोसेसर भएको लिनुपर्छ । त्यसैगरी ब्याट्रीको क्षमता पनि हेनुहोस् ।
उच्च क्षमताका फोनहरु जस्तो आइफोन सिक्स वा सामसुङ एस फाइभ किन्ने सोचमा हुँदा सुरुमा महंगो लागे पनि यिनीहरु तपाईँले लामो समय साथमा राख्न सक्नुहुनेछ । समयसँगै यिनमा लगानी गरेको प्रतिफल पनि अवश्य दिने गर्दछन् र वषैँसम्म राम्रोसँग चल्दछन् ।
ओपोको सस्तो स्मार्ट फोन 'ए १५' आजबाट नेपाली बजारमा सार्वजनिक
सबै भन्दा सस्तो सिम्फोनीको स्मार्ट फोन बजारमा
के तपाइलाई धेरै रिस उठ्छ ? यस्ता छन् रिस नियन्त्रण गर्ने उपायहरू...
रियलमीका उत्कृष्ट पाँच स्मार्टफोन
२५ हजार मुल्यको ओपो ए५४ नेपाली बजारमा
शाओमीले ल्यायो ‘एमआई टिभी स्टिक’, यस्तो छ विशेषता